Wednesday January 19, 2022 - 11:29:35
Mid kamida mas'uuliyiinta ugu sarraysa maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda ayaa lafilayaa in uu booqashadii ugu horraysay ku tago wadanka Turkiga si loo xoojiyo cilaaqaadka udhaxeeya labada dhinac.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaay shaaciyay in dalkiisa uu booqasho ku imaan doono madaxweynaha maamulka loogu yeero Isra'iil ninka lagu magacaabo Isaac herzog.
"Waxaanu wadahadal dhanka taleefanka ah yeelannay madaxweynaha Isra'el Isaac Herzog" sidaa waxa yidhi Erdogan.
Madaxweynaha Yahuudda ayaa lafilayaa in maalmaha soo socda uu ka dego garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Isntabul halkaas oo soo dhoweyn rasmi ah loogu sameyn doono.
Xukuumadda dabadhilifka Turkiga ayaa inta badan sheegta in ay la dareen tahay muslimiinta reer Falastiin isla markaana ay kasoo horjeedaan gummeysiga Yuhuuddu ka waddo dhulalka barakaysan basle sheegashadaas ayaa ah mid beerxawsi ah waxaana xusid mudan in Turkigu uu yahay dalka 5aad ee xiriirka dhaqaale laleh Yahuudda.
Cilaaqaadka diblumaasiyadeed ee Turkiga iyo Yahuudda ayaa xumaaday sanaddii 2010 kadib markii ay ciidamada 'Israa'iil' ay toogteen dad Turki ah oo la socday markab gargaar usiday shacabka magaalada Qaza balse cilaaqaadka dhaqaale iyo sirdoon ee labada dhinac waligiis ma go'in.
Shirkadda duulimaadyada Turkiga ayaa sanad walba boqolaal duulimaad ku tagtay magaalooyinka Yahuuddu haysato, kabaha buudka ah ee ay isticmaalaan ciidamada Booliska 'Israa'iil' waxaa soo saarta warshad kutaal dalka Turkiga.
Saciid Cabdullaahi Deni oo hoggaanka u haya wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha.